Joy'sBnb -Ikhaya Elilungileyo kuSapho_1 (Msg B4 Booking)
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRohit
Konwabele ukuhlala kwakho e-Imphal kweli khaya lipholileyo, lisanda kulungiswa. Eli khaya liseNagaram, umgama omfutshane ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kwaye i-ISBT yimizuzu nje emi-2 ukusuka endlwini. Udederhu lweevenkile, izibhedlele, iindawo zokutyela kunye neendawo zokutyela zasekhaya zonke zikwindawo ekufutshane nendlu.
Ibala lezemidlalo iKhuman Lampak lijongene nalo, kuhambo lwakusasa okanye uhambo lwangokuhlwa.
Igumbi lokuhlambela elitsha, elicoceke kakhulu, labucala kwigumbi ngalinye, igumbi lokuhlala eliqhelekileyo kunye nekhitshi elizisebenzelayo elixhotyiswe ngokupheleleyo.
Likhaya elihle, elisanda kulungiswa eNagaram, kwindlela yaseLamlong. Ithe ngqo kwibala lezemidlalo iKhuman Lampak. Izibhedlele, iindawo zokutyela, iivenkile zesebe, iindawo zokuthenga zonke zikude nje. Siqinisekisa ukuba uyakonwabela indawo ezolileyo, elungele ukuhlala kwiholide yosapho entliziyweni yesixeko sase-Imphal.
Umbuki zindwendwe ngu- Rohit
Iindwendwe/iindwendwe ziyakwamkelwa ngumphathi wethu xa ungenwa. Ubumfihlo bondwendwe emva kokungena yeyona nto iphambili kuthi. Siya kufumaneka kwimibuzo kwifowuni ngetekisi okanye ukufowunela 24*7 ukusuka check in de uphume
Ixesha lokuphuma lingo:01:00
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Imphal